Pipe Clamp Products, Automotive, ikuku intake Systems - Glorex
Daybọchị ọhụrụ abatala, echiche ọhụụ na - apụta. Nke a bụ mmalite nke ihe ọ bụla, a ga-enwekwa ihe ngwọta ka mma mgbe niile. Anyị si ebe dị iche iche na ndị na-emeghe obi anyị, anyị nwere ike ime nke ọma. Nke a bụ ịghọta nghọta ndị ahịa chọrọ n’ụzọ ziri ezi ma na-ele anya. Ejikọtara ha amamịghe anyị. Nke a bụ maka usoro inogide, nyocha data, na onye ndu mgbanwe. Ọ bụ gbasara ịrụkọ ọrụ ọnụ, ikerịta ihe ọmụma na ịchịkọ ọnụ. Azịza ngwa ngwa ihe ọkụkụ na-eme ka echi dị mma, ndị injinia na-ebute ma webata echiche ọhụrụ. Anyị na-achọkarị mgbe niile, anyị ga-ejikwa mgbanwe mgbe niile. Echiche bụ isi mmalite nke ihe niile, anyị na-atụgharịkwa ha n'eziokwu. Mica Pipeline Technology Co., Ltd. Isi mmalite nke okike, emere na China.
choo nnabata anyi
ngwa anya nile maka oge obula
Dị mfe iji, enwere ike wedata ya na ...
Mgbachi a nwere bandwidt abuo…
Atụmatụ: mgbanaka ime dị ...
Atụmatụ: Ọ nwekwara ike ịbụ eq ...
Atụmatụ: T-bolt clamps pro ...
Atụmatụ: Ndị na-anaghị emegharị ...
Germandị German hose mwekota